ZTE Axon 10 Pro 5G dị ugbu a na 12 GB nke RAM na 256 GB nke ROM | Gam akporosis
ZTE Axon 10 Pro 5G na-anata ụdị dị iche iche nke 12 GB nke RAM na 256 GB nke ROM
ZTE na-enye a Ram nke ohuru na oghere di n’ime Axon 10 Pro na njikọ 5G. Nke a dị site taa, mana ọ bụ naanị n'ahịa ndị China. Yabụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụta, ị ga-ebubata ya n'obodo ebe ị nọ. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ dị mma ịnwe ihe atụ nwere ikike nchekwa ka ukwuu.
Emere ekwentị ahụ na February na obere ụdị 6GB RAM dị iche na 128GB nke ebe nchekwa dị n'ime. N'oge ahụ amabeghị ọtụtụ ihe gbasara ịdị na ahịa. N'ezie, ruo mgbe izu ole na ole gara aga, a malitere inye ya na mba Europe, gụnyere Germany na Spain. Versiondị ọhụrụ nke 12 GB nke RAM na 128 GB nke ROM bụ nke anyị na-ekwu maka ya ugbu a, ma ekwuputala ya naanị maka ahịa ndị China.
Na China, Aha ya bụ Axon 10 Pro 5G A malitere ire ya n'oge na-adịbeghị anya na nyiwe dị iche iche dịka ZTE Mall, JD, Suning na Tmall, n'etiti ndị ọzọ. RAMdị RAM 6GB na 128GB nke nchekwa dị n'ime nwere ọnụahịa nke yuan 4,999, nke na-atụgharị ihe dịka euro 631 na ihe dịka $ 708 na ọnụego mgbanwe mgbanwe.
Ọhụrụ dị iche iche 12/256 GB dị maka ịzụta na China maka ego nke yuan 5,799, nọmba nke ihe ruru euro 732 ma ọ bụ ihe dị ka dollar 821. Ma atụla anya na ihe ọ bụla ọzọ karịa ahịa na ncheta na nke a; nke ndị ọzọ, ọ na-echekwa otu njirimara na nkọwapụta ama ama nke ọnụ.
Nke a bụ otú mbugharị ngwakọ 20x nke ZTE Axon 10 Pro 5G na-arụ ọrụ [+ Foto]
Iji weghachite ntakịrị, ZTE Axon 10 Pro 5G na-abịa na ihu ngosi AMOLED nke 6.4 nke anụ ọhịa nwere mkpebi FullHD + nke 2,340 x 1,080 pikselụ (19.5: 9), Qualcomm Snapdragon 855 processor, batrị 4,000 mAh nwere ike iguzo maka ngwa ngwa odori nke 18 watts ekele Ndenye n'Aka 4+ technology.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » ZTE Axon 10 Pro 5G na-anata ụdị dị iche iche nke 12 GB nke RAM na 256 GB nke ROM
OnePlus na-akwadebe ihe ruru 4 telivishọn na gam akporo TV
Nkọpu ahapụ OLED Ekwentị Panel Manufacturing